सुदूरपश्चिम « Janata Samachar
‘एसपी चोर कञ्चनपुर छोड !’ किन ?
काठमाडौं । कञ्चनपुरका तत्कालिन एसपी डिल्लिराज बिष्टले आफूलाई नियतबस फसाउने प्रपञ्च रचेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले त्रुटिलाई नियतबस पहाड बनाउने कार्य सिमित वर्गले गरेको खुलासा समेत गरेका
एसपी बिष्टका छोरा किरणले रुँदै प्रधानमन्त्रीलाई के भने ?
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षींया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका अभियुक्त अझै फेला परेका छैनन् । प्रहरी, उच्चस्तरीय छानबिन समिति र मानवअधिकार आयोगले समेत हत्याका दोषीको कुनै यथेष्ठ प्रमाण
निर्मला हत्याकाण्डः अपराध विज्ञ के भन्छन् ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाका सन्दर्भमा अपराध अनुसन्धानका विज्ञसँग बुधबार छलफल गरेको छ । आयोगले नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंह र
टेलिकमको गज्जबको दशैँ अफर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले दशैको उपलक्ष्यमा विभिन्न छुटसहितका सुविधा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले दशैंलाई लक्षित गर्दै अनलिमिटेड प्याक, भ्वाईस प्याक, डाटा प्याक, रिचार्जमा बोनस लगायतका सुविधा सार्वजनिक गरेको हो
घटस्थापनाको उत्तम साइत आयो
काठमाडौं । यो बर्षको दशैंमा टिकाको उत्तम साइत आगामी कार्तिक २ गते ९ बजेर ५१ मिनेटमा रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । बिहान ९ बजेर ३९ मिनेटमा देवी
घाइते लिन हेलिकोप्टर जाँदै
आशिष बहादुर सिंह बझाङ । जिप दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सख्या ३ पुगेको छ । मृत्यू हुनेमा बेदकोट नगरपालिका–५ कञ्चरपुर बस्ने ६५ वर्षीया विष्नादेवि बोहरा र घोडाघोडी नगरपालिका ५ कैलालीका
फेरि थपिए मन्त्री
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री थपिएका छन् । कञ्चनपुरका प्रकाश रावल राज्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुहुने भएको छ । कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ को १ बाट विजयी सांसद रावल आजै उद्योग,
जीप खस्दा धनबहादुर र बिष्नादेवीकाे मृत्यु, १२ घाइते
आशिषबहादुर सिंह डडेल्धुरा । बुङ्गल नगरपालिकामा दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा १२ जना घाइते भएका छन । बागथलाबाट बिजगडा जाने क्रममा ठिमिबगर भन्ने ठाउँमा बिहान साढे
आशीषबहादुर सिंह बझाङ । छोराछोरी न आफन्त । एकल महिलाको बास त्रिपाल र प्लाष्टिकका टुक्रा अनि चाउचाउ र बिस्कुटका कार्टुनले बेरबार पारेको टहरामा । ओढ्ने ओच्छ्याउने पनि चाउचाउ र विस्कुटका कार्टुनको
प्रेमराज अहिले करोडौंमा खेल्छन्
भिम चौधरी कैलाली । कुनै समय एक हजार रुपैया जुटाउन समेत प्रेमराज भट्टलाई गाहे थियोे । तर, अहिले प्रेमराज भट्टलाई करोडौं जुटाउन कुनै समस्या छैन । पढ्दापढ्दै च्याउ खेती थालेका